Qaybta 1: Waa maxay qaabka m2ts?
Qeybta 2: Waa maxay xiriirka ka mid ah MTS, M2TS iyo AVCHD
Qeybta 3: Sida loo ciyaaro m2ts files
Ciyaartoyda Mac salaysan: Part 4
Qeybta 5: Waa maxay sababta ma furi kartid .M2TS File? & Sida loo badalo m2ts faylasha?
Part1: Waa maxay qaabka m2ts?
M2TS waa kordhin file loo isticmaalo ee Blu-Ray kaas oo sidoo kale loo soo gaabiyo BDAV ay ku jiraan qaab file. Waxa loo isticmaalaa audio multiplexing, video iyo durdurrada oo kale. Kordhin kale ayaa waxaa loo adeegsaday .MTS iyo waxaa sidoo kale sida qaabka weelka loogu audio qeexitaanka sare, cajaladaha fiidiyowga, kuwaas oo ay isticmaalaan Blu-Ray technology loo isticmaalo. AVCHD waa iyo qaab kale oo ah in aad si dhow u la xidhiidha qaab tan iyo video qeexitaanka sare iyo maqal ah oo AVCHD qaabka file M2TS waxaa loo isticmaalaa.
M2TS waxay u taagan tahay MPEG-2 gaadiidka il iyo beddelid ugu danbeeyay in la sameeyo si ay u qaab file waxaa taas loo yaqaannaa BDAV u taagan Blu-Ray Disk Video Audio. Taageerada software ah qaab tani waa cabsi badan sida ay tahay mid ka mid ah farsamooyinka ugu dambeeya in la bilaabay in arrintan la xiriira. Nidaamka helaan content sare sir ka kooban oo ka mid ah disk Blu-Ray oo uu soo saaray. Dhammaan ka Blu-Ray ciyaartoyda in lagu horumariyo arrintan la xiriira in la hubiyo in design waa sida in content ee lo waxaa ciyaaray habka ugu fiican. Saddexda qeexidda ugu muhiimsan ee internetka waa sida soo socota:
http://pcsupport.about.com/od/fileextensions/f/m2ts-file.htm taageero PC
Part2: Waa maxay xiriirka ka mid ah MTS, M2TS iyo AVCHD
Waxaa jira xiriir adag oo u dhexeeya saddex qaabab in lagu kor lagu soo sheegay. The hore iyo xiriirka ugu horreeyey waa in qaab BDAV weelka ie M2TS waa heer ah in loo isticmaalo labada hartay arrintan la xiriira. The timestamp 188 byte waxaa kordhay 4 byte ka dibna mid ka mid ah kor u timaado in 192 byte oo loo yaqaan M2TS maalmeedkaaga. The .m2ts ama M2TS sidoo kale loo isticmaalaa in AVCHD taas oo ah qaab Cam qeexitaanka sare digital. AVCHD waa nooc aad u fudud fidinta Blu-ray ah oo uu leeyahay mid ka mid video iyo laba encodings audio. Marka ay timaado qaab kaydinta ka dibna waxa ay sidoo kale waa mid aad u muhiim ah in la ogaado in AVCHD u isticmaali kartaa tiro balaadhan oo ah qalab lagu kaydiyo oo ay ku jiraan DVD, CD, USB iyo xitaa Sata drives adag. The kordhin m2ts sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in weelka BDAV ee ku jira qaab in la diiwaan-geliyeen kaamirada qeexitaanka sare sida Sony, Canon iyo cams Nikon. Si kastaba ha ahaatee marka ay timaado qaabab AVCHD ka dibna waxaa jira arrin daran oo waafaqsan gudahood noocyada kala duwan. The cajaladaha Blu-ray in ay yihiin soo saaray hoos qaab weel BDAV uu si adag u isticmaalaan farsamooyinka video riixo oo halkaasay saddex iyaga ka mid ah waa sida H.262 / M2TS-2 part 2, H.264 / MPEG-4 AVC iyo SMPTE VC-1. Macluumaadka ayaa la siiyey ilaa hadda lagu macnayn karaa in mid ka mid ah lagu xukumay ie M2TS yihiin qaabab file waxaa in la xiriira BDAV, AVCHD iyo MPEG-2 il gaadiidka. Ka dib markii jira saddex ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ay tahay in la tixgeliyo marka ay timaado urur u dhexeeya MTS iyo M2TS.
MTS ahaa ee ay soo saarayaasha ie Sony oo Panasonic ah. Labada shirkadood waa kuwan soo saaray kaamirada HD iyo MTS waxaa loo isticmaalay sidii loo kordhiyo file arrintan la xiriira ah. M2TS ayaa si kastaba ha ahaatee waa qaab ah in loo isticmaalo in ay ku kaydiso filimada ku cajaladaha Blu-Ray.
M2TS waa qaab ah in uu leeyahay feature ugu fiican iyo kuwa ugu muhiimsan in waxa taageeray tirada qalabka. Qaar ka mid ah waa Sony Playstation 3S, Bravia TV ee, Xtreamer ciyaaryahan Media , iyo qalabka oo dhan iyo weliba kuwa taageera qaabka AVCHD sida Panasonic Viera TV ee. Tani dhibic arrintan la xiriira sidoo kale muujinaysa, in labada qaabab kuwaas oo ay si dhow u la xidhiidha kasta oo kale oo qalab ciyaareed ah ayaa sidoo kale laga soo saaray si loo hubiyo in xidhmaddaas weli xoog leh oo ay sii dhab ah la dhererka waqtiga.
Labada kordhin file MTS iyo M2TS waxaa loo isticmaalaa tiro ka mid ah ciyaartoyda sida windows media player, VLC iyo sidoo kale dhamaan ciyaartoyda Apple in isticmaalayso kan hadda wejiga kama dambaysta ah ee pro Mac OS. Dhammaan qalabka ku taageera AVCHD surin-in sidoo kale la hubiyo in qaabab file waxaa lagu taageeray oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Ciyaartoyda in ay halkan ku xusan in la hubiyo in goobaha default ah ay yihiin kuwa taageeraya noqdo fudud. Haddii user uu doonayo in uu isku dubaridi barnaamijyo kale si loo hubiyo in wixii kaloo la samayn, markaas waxaa muhiim ah in la ogaado in barnaamijyada sida loo isticmaali in la hubiyo in files la qaabab kuwaas oo aan la badaley kaliya ka dhigi lahaa, laakiin waxaa sidoo kale la soo ciyaaray taageero software dheeraad ah .
Part3: Sida loo ciyaaro m2ts files
Waxaa jira dhowr ka mid ah barnaamijyada software oo la hubiyo in natiijooyinka ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala ee la xiriirta si kastaba ha ahaatee kordhin file haddii aan sii wadi Aasaaska markaas waxaa muhiim ah in la ogaado in habka ugu fiican ee uu u ciyaaro ee files m2ts waa ay double magcaabo iyaga iyo sirdoonka ee OS inay hubiyaan in barnaamijka software ku haboon waxaa markaas la ogaado haddii lagu rakibay oo file waxaa ciyaaray ka dhigi doonaa. Marxaladani waxay khuseysaa labadaba Mac iyo Windows. Ka dib waxaa liiska 3 ciyaartoy daaqadaha ka ciyaari kara faylasha m2ts:
Sidoo kale loo yaqaan video LAN waa barnaamijka ugu fiican si loo hubiyo in files m2ts waxaa lagu ciyaaray isticmaalaya daaqadaha. URL ayaa download waa http://www.videolan.org/vlc/index.html
Freeware ayaa kama dambaysta ah si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo ee ugu fudud hab suurto gal ah iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. URL ayaa download waa http://www.bsplayer.com/
Ciyaaryahanka ugu wanaagsan si ay u hubiyaan in qaab m2ts waxaa ciyaaray isticmaalaya daaqadaha. Tani ciyaaryahan fudud iyo xarrago lagala soo bixi karaa URL http://www.avs4you.com/AVS-Media-Player.aspx
Ciyaartoyda Mac salaysan: Part4
Ka dib waa labada ciyaaryahan ee loo baahan yahay inuu ka ciyaaro Mac m2ts files.
Simple iyo fududahay in la isticmaalo iyo sidoo kale soo dajiyo. Rating guud waa mid aad u wanaagsan si ay u helaan ciyaaryahanka iyo URL download waa http://anymp4-mac-blu-ray-player.en.softonic.com/mac
Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican si loo hubiyo in ciyaaro file m2ts waa cabsi iyo is ku tiirsan. URL ayaa download waa http://free-mac-blu-ray-player.en.softonic.com/mac
Part5: Maxaad u ma .M2TS furan gudbin kartaa?
Waxaa jira dhowr ka mid ah sababta oo saamayn ku yeelan kara nidaamka tirada siyaabo iyo sabab la mid ah. M2TS files aan la soo ciyaaray. Sababta ugu badan ee dhibaatadan waa in user ma awooddo in ay fahmaan nooca wixii of file .M2TS ah inuu isku dayayo inuu ciyaaro. Falanqaynta waa waxa ugu muhiimsan oo qalab ugu fiican si ay u falanqeeyaan faylka arrintan la xiriira waxaa laga heli karaa http://www.solvusoft.com/en/file-extensions/file-extension-m2ts/ oo waa kan ugu fiican in arrinta la xalin gudahood markii lahayn.
Sida loo badalo m2ts faylasha?
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo arrintan la xiriira waa in la hubiyo in ay Wondershare Video Converter Ultimate la soo bixi URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html taas oo ah mid ka mid kuwa qalabka oo la hubiyo in wixii kaloo loo sameeyo habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in convertor ayaa la qiimeeyo sare by user sida uu hubiyaa in files ka M2TS yihiin diinta qaab la doonayo aan arin kasta oo dhib in la hubiyo in user marnaba wajahayo arrinta wax ka mid ah oo tayo leh ama xalinta iyo taabto final yahay oo waafaqsan shuruudaha.
> Resource > Beddelaan > 10 Su'aalaha aad doonayso inaad ogaato oo ku saabsan files M2TS